Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Eyona mizi mveliso inkulu edadayo ehlabathini
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Eyona mizi mveliso idadayo inkulu ehlabathini ibizwa ngokuba yiOXAGON, kwaye iseSaudi Arabia.
Kuthatha umbono weRoyal Highness Mohammed bin Salman ukunika amandla le projekthi enkulu nge-100% yamandla avuselelekayo.
Amandla acocekileyo, izinto zanamhlanje zokubonelela nge-OXAGON ukuxhasa amaqabane oshishino
OXAGON ukwamkela oovulindlela bemizi-mveliso ukususela ngo-2022
Amashishini asixhenxe angundoqo axhaswa ngamandla ahlaziyekayo ukuxhasa uphuhliso lwemizi-mveliso
Uyilo olulodwa lwe-octagon luxhasa uphuhliso loQoqosho oluBlue lweNEOM
Ubukhosi bakhe obuphezulu uMohammed bin Salman, iNkosana yeNkosana kunye noSihlalo weBhodi yeNkampani ye-NEOM yabalawuli, namhlanje ubhengeze ukusekwa kwe-OXAGON, eyenza isigaba esilandelayo sesicwangciso esiyintloko se-NEOM kunye nokumela imodeli entsha ecacileyo kumaziko okuvelisa azayo, ngokusekelwe kwizicwangciso ze-NEOM zokuchaza ngokutsha indlela uluntu oluphila ngayo kunye nokusebenza kwixesha elizayo.
Ngomsitho wokubhengezwa kokusekwa kwesi sixeko, uBukhosi bakhe obuPhezulu uthe: "I-OXAGON iya kuba yinto ekhuthaza ukukhula koqoqosho kunye nokwahlukana kwe-NEOM kunye noBukumkani, ukufezekisa ngakumbi amabhongo ethu phantsi koMbono wama-2030. I-OXAGON iya kuba negalelo ekuchazeni ngokutsha indlela yehlabathi yophuhliso lwemizi-mveliso kwixesha elizayo, ikhusela okusingqongileyo ngelixa idala imisebenzi kunye nokukhula kweNEOM. Iza kuba negalelo kurhwebo norhwebo lwengingqi yaseSaudi Arabia, kwaye ixhase ukuyila indawo entsha ekugxilwe kuyo kurhwebo lwehlabathi jikelele. Kuyandivuyisa ukubona ukuba ushishino nophuhliso luqale phantsi kwaye sijonge phambili ekwandeni okukhawulezileyo kwesi sixeko.”
UNadhmi Al-Nasr, i-CEO ye-NEOM, uthe: “Nge-OXAGON, kuya kubakho utshintsho olusisiseko kwindlela ihlabathi eliwajonga ngayo amaziko okuvelisa. Yintoni esikhuthazayo kukubona intshiseko yenani lamaqabane ethu abonise ulangazelelo lokuqalisa iiprojekthi zabo e-OXAGON. Aba vulindlela botshintsho baya kuseka iifektri, eziphuhliswe ngetekhnoloji yamva nje kubukrelekrele bokwenziwa, ukuphumeza umtsi obalulekileyo ngeli xesha kwiNguqulelo yesine yoShishino. Njengakwi-LINE, i-OXAGON iya kuba sisixeko esinengqiqo esibonelela ngabahlali baso ngendlela ekhethekileyo. ”
Iquka ummandla omkhulu kwikona ekumzantsi-ntshona we-NEOM, undoqo wokusingqongileyo edolophini ugxile kwizibuko elidityanisiweyo kunye nolungiselelo lolungiselelo oluza kuhlala uninzi lwabahlali abalindelweyo besixeko. Uyilo olulodwa lwe-octagonal lunciphisa impembelelo kokusingqongileyo kwaye lubonelela ngokusetyenziswa komhlaba okona kulungileyo, kunye nentsalela evulekileyo ukuze kugcinwe i-95% yendalo esingqongileyo. Uphawu oluchazayo lwesi sixeko sesona sakhiwo sidadayo sikhulu kwihlabathi, esiya kuba liziko le-NEOM's Blue Economy kwaye sizuze ukukhula okuzinzileyo.
I-OXAGON izalisekisa ifilosofi efanayo kunye nemithetho-siseko YOMDA (eyabhengezwa ngoJanuwari 2021) kwaye iya kunika ubomi obukhethekileyo ngokuhambelana nendalo. Ibekwe ngokufanelekileyo kuLwandle oluBomvu kufutshane neSuez Canal, apho malunga ne-13% yorhwebo lwehlabathi ludlula, i-OXAGON iya kuba yenye yezona ndawo zihamba phambili kwezothutho zehlabathi ezinezibuko elidityanisiweyo elikumgangatho ophezulu kunye noqhagamshelo kwisikhululo seenqwelomoya.
I-OXAGON ukuseta iibenchmarks zehlabathi kubuchwephesha obuphambili
I-OXAGON iza kuseka izibuko lehlabathi elidityaniswe ngokupheleleyo kunye nenkqubo yobonelelo ngendalo ye-NEOM. Izibuko, izibonelelo zolungiselelo kunye nokuhanjiswa koololiwe ziya kumanyaniswa, zibonelele ngamanqanaba emveliso ekumgangatho wehlabathi ngokukhutshwa kwekhabhoni engasebenziyo, ibeka imilinganiselo yehlabathi ekwamkelweni kobuchwepheshe kunye nokuzinza kokusingqongileyo.
Inkqubo eguquguqukayo kunye nedibeneyo yokubonelela ngemizimba kunye nedijithali kunye nenkqubo yezothutho iya kuvumela ukucwangciswa kwexesha langempela, okukhokelela ekunikezelweni okukhuselekileyo kwexesha, ukusebenza kakuhle kunye nokuphumelela kweendleko kumaqabane amashishini.
Eyona nto iphambili ye-OXAGON iya kuba kukwamkelwa kwezona teknoloji ziphezulu kakhulu njenge-Intanethi yeZinto (IoT), ukudityaniswa koomatshini bomntu, ubukrelekrele bokwenziwa kunye nokuxela kwangaphambili, kunye neerobhothi, zonke zidityaniswe kuthungelwano lwamaziko osasazo oluzenzekelayo kunye nokuzimela. Ii-asethi zonikezelo lwemayile yokugqibela ukuqhuba amabhongo e-NEOM okudala uthungelwano oludibeneyo, olukrelekrele kunye nolusebenzayo.
Amacandelo asixhenxe avelisa izinto ezintsha, onke anikwe amandla nge-100% yamandla ahlaziyekayo
Isixeko esingenaziro siya kunikwa amandla nge-100% yamandla acocekileyo kwaye siya kuba yindawo ekugxilwe kuyo kwiinkokeli zeshishini ezifuna ukuba ngoovulindlela kutshintsho ukwenza iifektri eziphambili nezicocekileyo zekamva.
Amacandelo asixhenxe enza isiseko sophuhliso lwemizi-mveliso ye-OXAGON, kunye nezinto ezintsha kunye nobuchwepheshe obutsha obudala isiseko esibalulekileyo kula mashishini. La mashishini angamandla azinzileyo; ukuhamba okuzimeleyo; ukuveliswa kwamanzi; imveliso yokutya ezinzileyo; impilo kunye nokuphila kakuhle; ubuchwephesha kunye nokuveliswa kwedijithali (kubandakanya unxibelelwano, iteknoloji yasemajukujukwini kunye neerobhothi); kunye neendlela zanamhlanje zokwakha; zonke zinikwe amandla yi-100% yamandla ahlaziyekayo.
Uluntu maludityaniswe nendalo
Uninzi lweempawu zoMGCA obonelela ngokuphila okukhethekileyo zibonakaliswa kwimbonakalo yedolophu yase-OXAGON. Uluntu luya kuhambeka, okanye ngokushukunyiswa kwe-hydrogen-powered. Ushishino oluzinzileyo luya kwakhiwa lujikeleze uluntu, lucutha ixesha lokuhamba kwaye lubonelele ngokuphila okukhethekileyo kunye nendalo edityaniswe ngaphandle komthungo kwimekobume yedolophu.
Imfundo, uPhando kunye noTshintsho kumaziko akhuphisanayo ehlabathi
I-OXAGON iza kuvelisa izinto ezintsha ukuze kudalwe uqoqosho olusetyhula ngokwenene olunommandla wentsebenziswano owakhelwe malunga nophando kunye nokuveliswa kwezinto ezintsha: Ikhampasi ye-OXAGON ye-innovation iya kubamba i-Ecosystem ye-Education, Research and Innovation (ERI) ukuze ikhuphisane namaziko ehlabathi asekiweyo.
Uphuhliso lwe-OXAGON luqhuba kakuhle kwaye uyilo luyaqhuba kumaziko amakhulu okuvelisa. Ezi zixhobo ziquka iprojekthi enkulu ye-hydrogen eluhlaza kwihlabathi ebandakanya iiMveliso zoMoya, i-ACWA Power kunye NEOM kwilinge leenxalenye ezintathu; owona mzi-mveliso mkhulu wokwakha iimodyuli uphambili ehlabathini oneGulf Modular International; kunye neyona ndawo inkulu yedatha ye-hyperscale kwingingqi, intsebenziswano phakathi kwe-FAS Energy kunye ne-NEOM.
Ngenkqubo yolawulo ekumgangatho ophezulu yohlobo lwayo lokuxhasa abantu abaninzi, i-OXAGON iya kukhula ngokukhawuleza kwaye yamkele abaqeshi bayo bokuqala bemveliso ekuqaleni kuka-2022.
I-NEOM isisikhawulezisi senkqubela phambili yomntu kunye nombono wendlela ikamva elitsha elinokuthi lijongeke ngayo. Ngummandla osemantla ntshona eSaudi Arabia kuLwandle oluBomvu eyakhiwa ukusuka phantsi ukuya phezulu njengelebhu ephilayo-indawo apho ushishino luza kudwelisa ikhondo leKamva Elitsha. Iya kuba yindawo yokusingwa kunye nekhaya labantu abaphupha kakhulu kwaye bafuna ukuba yinxalenye yokwakha imodeli entsha yokuphila okukhethekileyo, ukudala amashishini akhulayo kunye nokubuyisela ulondolozo lwendalo.
I-NEOM iya kuba likhaya kunye nendawo yokusebenza kubahlali abangaphezu kwesigidi abavela kwihlabathi liphela. Kuya kubandakanya i-hyperconnected, iidolophu kunye nezixeko zengqondo, amachweba kunye neendawo zamashishini, amaziko ophando, iindawo zezemidlalo kunye neendawo zokuzonwabisa, kunye neendawo zokutyelela. Njengeziko lokusungula izinto ezintsha, oosomashishini, iinkokeli zoshishino kunye neenkampani ziya kuza kuphando, zifukame, kwaye zirhwebe ngetekhnoloji entsha kunye namashishini ngeendlela ezothusayo. Abahlali be-NEOM baya kubandakanya i-ethos yamazwe ngamazwe kwaye bamkele inkcubeko yokuhlola, ukuthatha umngcipheko kunye nokwahlukana - konke okuxhaswa ngumthetho oqhubekayo ohambelana nezithethe zamazwe ngamazwe kunye nokukhuthaza ukukhula koqoqosho.